Soo dejisan BullGuard Antivirus 20.0.374 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: BullGuard Antivirus
BullGuard Antivirus – waa software si aad u ilaaliso kombiyuutarkaaga iyo macluumaadka isticmaalaha weerarada khatarta ah iyo shabakadaha. BullGuard Antivirus waxay isticmaashaa tiknoolijiyada firfircoon ee lagu ogaanayo hanjabaad cusub oo aan la garaneyn oo noqon karta qaababka aan la rabin, faylasha khatarta ah, dabeecadda software ee shakiga leh, saamaynta taban ee diiwaanka, iwm. Diiwaanka nabdoonaanta wuxuu ka shaqeeyaa asalka iyo wuxuu ka digayaa dhibaatooyinka nidaamka qalliinka nabadgelyo, badanaaba keena ficillada. BullGuard Antivirus waxay taageertaa muuqaalka kumbuyuutarka ee badbaadsan kaas oo ka ilaaliya kombiyuutarkaaga boggaga xaasidnimada leh iyo waxay muujinaysaa khatarta khatarta ku jirta makiinadaha raadinta leh calaamad digniin ah. Qeybta cayaaraha ee BullGuard Antivirus waxay xayiraa farriimaha pop-up iyo hagaajinta waxqabadka processor si ay u ciyaaraan ciyaaraha buuxda si ay u xoojiyaan gameplay iyo baabi’iyaan lumista heerarka xawaaraha.
Ogaanshaha hanjabaad cusub iyo mid aan la aqoon
Ka ilaalinta bogagga internetka iyo xiriirka xun
Soo dejisan BullGuard Antivirus
Faallo ku saabsan BullGuard Antivirus
BullGuard Antivirus Xirfadaha la xiriira